Indlela Ngokushesha Thola i-visa Greece?
Greece - omunye ambalwa amazwe EU ukuthi bayajabula ngempela ukuthatha abahambi Russian ngisho phambi crisis akazange abeke yisiphi izithiyo ukuthola i-visa. Ikakhulukazi uma kuyindodana izivakashi.
Eqinisweni, elula futhi indlela esheshayo ngempela ukuba bathole imvume yokuhlala kuleli zwe eningizimu - ukuze ujike a ejensi ezikhethekile. Yiqiniso, ungenza konke kwayona, kodwa ngeke isikhathi eside futhi kuyodingeka wenze umzamo. Ngakolunye uhlangothi ezihlukahlukene visa izikhungo zithathwa zonke draw for 5-10 zinsuku. Yilokho nje kuzobiza ngempela eqolo, ezisukela dollar angamakhulu amabili. Ayanda isigaba visa, le ezibizayo. Ngokwesibonelo, i-visa ngonyaka eGreece ukuba wathola esikhathini esingaphansi kwesonto. Kodwa kuwufanele 500-1000 zamadola, kuncike inhloso yohambo.
Enye indlela - ukuthenga ithikithi. lingashajwa visa inkampani yokulungisela abahambayo. Izokubiza eshibhile kancane, ikakhulukazi uma waqoqa iqembu elikhulu izivakashi abakulungele ukukhokhela le sevisi. Kodwa kukhona okunye ukukhetha: a eshibhile, kodwa hhayi ngokushesha. Ibhekane inqubo, uzokwenza, futhi inkampani yokulungisela abahambayo nje ukusiza iseluleko. Lokhu okuhlukile ingaze okuphelele ngisho.
Into ebaluleke kakhulu ukuthola i-visa - kuba ukugcwaliswa ilungile futhi ephelele imibhalo edingekayo. Lokho kuxhomeke ezicini eziningi, yenza kahle kanjani ukudlula zonke izimo, futhi ukuthola i-visa. Ngakho-ke, ngosizo kulesigaba ngokuvamile ebaluleke kakhulu. Yonke enye into, ngoba lokho kumangalelwa imali Brokerage liqinile, kunalokho, indaba lula. inqubo hhayi lukhuni ngokwako visa. Ngaphezu kwalokho, kuthiwa lokhu kukhona abanye uhlobo isivumelwano phakathi ohulumeni Russia naseGrisi, ngakho-ke uma kungekho nerekhodi lobugebengu, muntu niggles ethile.
Ngempela, ngesikhathi ibambene isizini izivakashi, ungathola kalula. Abamele iziphathimandla ngesiGreki ngokwengxenye enkulu uyazinaka kuphela izinto ezimbalwa: nesikhathi esiqondile, okungukuthi, Ngesineke ngokuningiliziwe indlela, isiqinisekiso yokubhuka futhi ukutholakala amahhotela kudingekile ukuba nemali ubuncane. Esikhathini yokugcina wacasulwa kusukela emaRandini ayizigidi ezingamashumi amahlanu ngosuku kuleli zwe. Eqinisweni, lezi zimfuneko zivamile wonke-European Union, futhi balungise amaphepha adingekayo asekelayo ngaphandle kwezinkinga.
Okubaluleke kakhulu, hlola imibhalo yabo ngokucophelela. Uma ukuthola iphutha noma ekuthathwa ngokuthi osolisayo, inqubo kungathatha. Kube khona izindaba ukuthi abasebenzi lenxusa ngokuvamile isimiso futhi unqabe endaweni Schengen iminyaka eminingi.
Refueling "Lukoil" phezu M4: bangaphi labo abakumangalelayo? Izibuyekezo
Visa Czech: ubuqili design
Ikheli Manor Sukhanovo, isithombe, umlando
Futhi lapho eMoscow kungenzeka Fry kebab shish?
Likuphi emfuleni Kiya? Incazelo nesithombe
Golden Gate e uVladimir. zokungcebeleka Elihle idolobha
I-Arthralgia: izimpawu nezindlela zokwelashwa
Yini aerogrill engcono?
Isifo samaphaphu. Kuyathathelena noma cha le zokugula?
Bahrain ezikhangayo ukuthi bayakufanelekela kokubona
Izindlela Verbal yokuxhumana
Amathayili Ceiling kusukela Foam: izinhlobo, izici, imiyalelo kanye impendulo
Iyiphi ikhadi lempesheni yepensheni yeplastiki engcono kakhulu?
Fiat Coupe: incazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Prokaryotic iseli - cell umzimba oyi-zenuzi
Impucuko 5: Izidingo uhlelo kanye ekuhlaziyeni ezintsha
Lipofilling wamabele: izici izinqubo plastic
Lobsang Rampa: Biography, izincwadi